Izisebenzi eziyizipoki eNhlokodolobha? - Bayede News
Isithombe: Igunundu Press/nguSiyethaba Mhlongo
UMasipala uMsunduzi osube ngaphansi komlawuli iminyaka emibili ngenxa yokwehluleka ukuhlinzeka izakhamuzi zawo ngezinsiza kanye nokwantuleka kwemali kulo Mkhandlu. Usuphinde waba wundabamlonyeni kusukela ngesonto eledlule cishe izwe lonke ngokuthi uholela izisebenzi ezingaziwa, eziqanjwe ukuthi izipoki. IMeya yoMsunduzi uMzimkhulu Thebolla ibe nengxoxo neBAYEDE ichaza ngezinkinga ezihlangabezana nalo Masipala oseNhlokodolobha yesifundazwe iKwaZulu-Natal nokuthi bazixazulula kanjai.
Iqale ngokuveza ukuthi kwenzekani ngezisebenzi abanazo ezili-121 ezingaziwa, nokuthi ngabe lolu daba seluxazululiwe yini.
IMeya isiphendula ithe: “Ukumiswa kokuholelwa kwalezi zisebenzi ezili-121 bekungadalwa izinkinga ezivela ngaphandle kepha bekuyisenzo sethu sangaphakathi ngoba sitholile ukuthi abantu esibaholelayo abalingani nesibalo sezisebenzi okuvela ukuthi sinazo uma sibheka uhlu lwezisebenzi lwethu, okuholele ekutheni siqale uhlelo lokubala izisebenzi zethu. Ngesikhathi sisohlelweni lokubala izisebenzi zethu, ezili-121 zehlulekile ukuza phambili ziziveze, okuholele ekutheni ngoMasingana sithathe isinqumo sokuthi imiholo yazo ayimiswe zize zivele. NgoLwesihlanu olwedlule abangama-63 bazivezile, kusele abangama-58.”
Iqhube yathi lolu hlelo luzolandelwa uphenyo lokuthola ukuthi ngabe lezi zisebenzi ziyizipoki ngempela noma kunezinye izizathu ezinqala ezaholela ekutheni zingazivezi ngoba kulaba abangama-63 abavelile bafike nezizathu eziningi ezahlukahlukene futhi ezizwakalayo.
“Ezinye izisebenzi bezigula. Njengoba kunokhuvethe asisebenzi ngezisebenzi eziphelele ngakho baveza izizathu ezizwakalayo, imiholo yabo seyikhokhiwe, abangama-58 ilaba abasele,” usho kanje.
IMeya uThebolla ichaza ukuthi yini abazobe beyibheka uma bengagcina bengavelanga laba abangama-58 ithe: “Okokuqala inhloso yethu ukuqinisekisa ukuthi asikhokheli abantu abangahlinzekanga uMasipala ngezinsiza lokhu kuzosho ukuthi noma ngabe ubani obethola umholo noma obenendima ayiklamayo ukuba kukhokhelwe laba bantu uzothwala icala.”
Iphendula ukuthi kungabonakala yini sekukhona ababoshwayo ngenxa yalesi senzo ithe: “Uma bekhona kukhona abayoboshwa, futhi kuzodingeka ukuba sibuyelwe yile mali ebesiyiholela futhi sizokwazi kahle ukuthi ngobani lezo zisebenzi.”
IMeya iphendula ukuthi bazoqinisekisa yini ukuthi uMasipala awuzitholi usenkingeni efanayo kusasa kanye nokuvikela indlela abakhokha ngayo ithe: “Njengamanje sisasebenza lokho, i-Organogram seyibuyekeziwe, esinye sezizathu sokuthi sidlule kulokhu okuphoqelele ukuba kumiswe imiholo yabanye ingoba besibuyekeza i-Organogram okuthathe imnyaka eli-10 kuya kweli-13. Njengamanje siyazi ukuthi iziphi izisebenzi esinazo futhi zenza muphi umsebenzi, okuzosisiza ekutheni sibone ukuthi imiphi imisebenzi enganabanini, sikholwa ukuthi ngeke siphinde sizithole sisesimweni esifanayo siwuMasipala.”
Amasosha abonga uMhlonishwa uSisulu
Isitatimendeni esikhishwe uMasipala sithi: “Sesifundile ngolwazi oludukisa umphakathi oluholele ekutheni nezinkampani zamaphephandaba zibhale udaba ngakho. Ukuqinisekisa kwezisebenzi uhlelo lwaqala mhla zingama-30 kuLwezi ngowezi-2020 kuya zi-3 kuZibandlela. Isaziso saphuma zili-19 kuLwezi. Izisebenzi ebezenza lo msebenzi wokuqinisekisa bezivakashela izisebenzi lapho zisebenzela khona.”
Siqhuba sithi: “Mhla zili-14 kuya zili-18 kuZibandlela kwagqugquzelwa lezo zisebenzi ezazingezanga ukuzoqinisekisa ukuba ziye ehholo ledolobha ziyoqinisekisa ukuthi zisekhona njengezisebenzi zalo Mkhandlu. Ukuqinisekisa ukuthi azikho izisebenzi ezisalela ngaphandle okuyizisebenzi ezibalelwa ema-368 ebezisathathe ikhefu ngoZibandlela, kwaphinde kwavulwa ithuba lokuba zizoziveza mhla zingama-29 kuMasingana kuya zi-3 kuNhlolanja nyakenye lokhu okwasekungokokugcina ukuba ziziveze.”
Lesi sitatimende siphetha ngokuthi uMasipala uzimisele ngokuthola nokuvundulula yonke inkohlakalo eqhubekayo.
Okhulume neBAYEDE ocele igama lakhe ukuba ligodlwe naye ongaholanga eveza izizathu zakhe uthe: “Njengoba kunokhuvethe mina nginezifo ezaziwayo futhi neminyaka yami isemashumini ayisithupha lokho kuholele ekutheni ngingayi emsebenzini, ngoba isimo sempilo asivumi, ikakhulukazi mina bengisemakhaya ngibuye ngoba ngibona ngingaholi. Nokho besengizwile ukuthi kunezipoki ngizwa emsakazweni, ngaxakwa ukuthi angiholi kanjani ngosuku lokuhola. Njengoba sengiyile ukuyoqinisekisa ngifike ngethula udaba lwami ukuthi angiqinisekisanga ngani. Manje sengifikile ngaqinisekisa ukuthi ngikhona sekuthiwe ngizohola.”